Baschi ပိန်ဆေး ဆက်ရေးခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Baschi ပိန်ဆေး ဆက်ရေးခြင်း
ဒီစာတင်ထားတာ (၄) ရက်သာရှိသေး၊ ထပ်မေးတယ်။ ကြော်ငြာဆေးဆို အလွန်မေးကြတယ်။ ကနေ့ပဲ မြန်မာပြည်မှာ အဲလိုကြော်ငြာဆေးရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ အလွန်ချမ်းသာကြတယ်လို့ မန္တလေးသူတယောက်က ပြောသေးတယ်။ လူတွေလည်း အတော်ကိုပိန်နေကြပြီထင်တယ်။
၁။ ဆရာရှင့် Buschi orange ဆေးကို ၃ဘူး၎ဘူးလောက်သောက်ဖူးပါတယ်။ အဲ့ထာတွေအတွက် ဆိုးကျိုးဖစ်နိုင်သလား ဆရာ ပီးတော့ မျက်ကွင်းညိုနေတာ အိပ်မပျော်ထာတွေက side effect လားဆရာ မသိလို့ ပြောပြပေးပါဆရာ
ခဏခဏ (ခဏခဏ) ဖြေနေရ။ ဘလော့မှာဖတ်နိုင်။ တမြန်နေ့လောက်ကတခါ အသစ်ရေးသေး။ သတိပေးချက်တွေပါရှိ။ ဘလော့မှာသာဖတ်ရန်။ ကြော်ငြာဆေးဆို အလွန်မေး။
ဟုတ်ဆရာ ၄ဘူးလောက်သောက်ခဲ့တော့ ဆိုးကျိုးရှိလာမှာလား မသိလို့ဆရာ
၂။ ဆရာရေ ရိုသေလေးစားစွာ စာရေးလိုက်ပါတယ်။ သမီးက နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း (ခ) ကျောင်းသူတယောက်ပါ။ fb မှာ ခုတလောတွေ့နေရတဲ့ ပြသနာလေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆရာဝေဖန် ပေးစေလိုပါတယ်။ Baschi ဆိုတဲ့ပိန်ဆေးကြောင့် ယခုအခါ သေတဲ့သူများရှိလာပြီး ဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာနမှာ ခဏခဏ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက် ရောက်လာကြတယ်လို့ အလုပ်သင်ဆရာဝန်အမများပြောတာသိရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်တော့ Australia government က ဒီလိုလေး ကန့်သတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှာလည်းတရားဝင် လိုင်စင်မရသေးဟုသိရပါတယ်။ ဆရာ့အနေနဲ့ Baschi အကြောင်းရေးတာ တခါဖတ်ဖူးပါတယ်။ ယခုလူငယ်အများစုကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ ထိုပိန်ဆေးအကြောင်း ဆရာ့အမြင်အနေနဲ့ ဆွေးနွေးပေးပါလို့ လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒါက သမီးတို့ရှာဖတ်ထားတဲ့ တားမြစ်စာပါ။
ဒီပိန်းဆေးအကြောင်း ရေးထားတာကြာပြီ။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ မေးတာများတိုင်း ပြန်တင်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ဆေးကြော်ငြာမှာ ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာထဲက စာပိုဒ်တချို့နဲ့အတူဖတ်ကြရလို့ ကျွန်တော့်ကို အသိပေးလာသူ ၉-၁ဝ ယောက်လောက်ရှိတယ်။ Baschi ပိန်ဆေးက ကြော်ငြာဆေးဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကွဲလေးတွေ၊ ဆေးဗူးအရောင်မျိုးမျိုး၊ မော်ဒယ်မိန်းကလေး ပိန်ပိန်လှလှလေးတွေနဲ့ ရောင်းပါတယ်။
FDA ဆိုတဲ့ ဆေးဝါးနှင့်အစားအသောက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဆိုတာ ဆေးတွေရော အစားအသောက်တွေကိုပါ စစ်ဆေးတယ်။ ခွင့်ပြုချက်ပေးတယ်။ တားမြစ်ချက်လည်းထုတ်တယ်။ သတိထားစရာကတော့ Vitamins ဗီတာမင်တွေ၊ Dietary supplements ဖြည့်စွက်စာတွေ၊ Tonics အားဆေးတွေလို့ ကုန်ပစ္စည်းအတန်းအစားတပ်ရင် FDA က မကန့်ကွက်တာကို ခွင့်ပြုချက်လို့ပြောရင် ကွဲလွဲတယ်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထဲမှာ ယူအက်စ် FDA ကနေ Dietary supplements ဖြည့်စွက်စာ (၂ဝ) မျိုးကို တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။
ပိန်ဆေးတွေထဲမှာ လူသုံးများတာကတော့ Sibutramine ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာ ရူးပီးကုဋေ ၂ဝဝ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆေး ဈေးကွက်ထဲမှာ Meridia နာမည်နဲ့ ရောင်းပါတယ်။ အမေရိကားနဲ့ ဥရောပမှာတော့ ဒီဆေးကို ရောင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ပါပြီ။ နှလုံးရောဂါဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
1. Dexfenfluramine = Likely to be ieffective or harmful ထိရောက်မှု မသေခြာ သို့မဟုတ် စိတ်မချရ၊
2. Diethlyproprion = Trade off မသုံးတော့၊
3. Fenfluramine + Phentermine = Likely to be ieffective or harmful ထိရောက်မှု မသေခြာ သို့မဟုတ် စိတ်မချရ၊
4. Fenfluramine = Likely to be ieffective or harmful ထိရောက်မှု မသေခြာ သို့မဟုတ် စိတ်မချရ၊
5. Fluoxetine = Trade off မသုံးတော့၊
6. Maxindol = Trade off မသုံးတော့၊
7. Orlistat = Trade off မသုံးတော့၊
8. Phentermine = Trade off မသုံးတော့၊
9. Phenylpropanolamine = Likely to be ieffective or harmful ထိရောက်မှု မသေခြာ သို့မဟုတ် ဒုက္ခပေးနိုင်သည်။
10. Sibutramine + Orlistat = Trade off မသုံးတော့၊
11. Sibutramine = Trade off မသုံးတော့၊ တားမြစ်ထား။
Baschi သာမကပါ မြန်မာပြည်မှာပိန်ဆေးတွေ အမျိုးမျိုးရောင်းတယ်။ ဆေးနာမည်တွေအကုန်လိုက်မမီပါ။ လက်ဖက်ရွက် ကတော့ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု မရှိသလောက်နည်းသလို ထိရောက်မှုလည်းမရှိပါ။ တားမြစ်ထားတဲ့ဆေးတွေ ပါနေရင် သုံးစွဲဖို့မသင့်ပါ။ Baschi နဲ့ တချို့ပိန်ဆေးတွေထဲမှာ Sibutramine ဆေးပါတယ်။
၂၂-၁၂-၂ဝဝ၈ နေ့က ယူအက်စ်မှာ (၂၇) မျိုးကို သတိပေးချက်ထုတ်ပါတယ်။ Dietary supplements ဖြည့်စွက်စာတွေ ဖြစ်တယ်။ Sibutramine ပါနေလို့ဖြစ်တယ်။ ၂ဝ၁ဝ ကနေဒါမှာလည်း Herbal Diet Natural သဘာဝ ဘယဆေး အာဟာရထဲမှာ Sibutramine ပါနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်တယ်။ ၂ဝ၁ဝ အောက်တိုဘာလထဲမှာ Slimming Beauty Bitter Orange Slimming Capsules ပိန်ဆေးထဲမှာ Sibutramine ပါနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်တယ်။ တလတည်းမှာပဲ ယူကေမှာ Payouji tea လက်ဖက်ရွက်ပိန်ဆေးနဲ့ Pai You Guo Slim Capsules ပိတ်ဆေးတွေထဲမှာ Sibutramine ပါနေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်တယ်။ ၃ဝ-၁၂-၂ဝ၁ဝ နေ့က ယူအက်စ်မှာ Fruta Planta dietary products ထဲမှာ Sibutramine ပါနေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်တယ်။
• China slim Tea တရုပ် (ဆလင်းမ်) လက်ဖက်ရည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/…/china-slim-tea.html
• Asia Skin Products အာရှအမျိုးသမီးတွေအတွက် အမေရိကန်တံဆိပ်နဲ့ကြော်ငြာရောင်းနေတဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/…/05/asia-skin-products.h…